Wariyeyaal caan ah oo lagu xiray Magaalada Dhuusamareeb iyo Xog laga helay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa waxaa fiidnimadii hore ee xalay lagu xiray laba Wariye oo siweyn looga yaqaano halkaas kana howlgala Magaaladaas.
Wariyeyaasha xiran oo lagu kala magacaabo Cabdullaahi Warsame Rooble iyo Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa kahor xarigooda sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay soo gaarayeen farriimo hanjabaad ah oo isugu jiray dil iyo xarig loo geysan doono.
Muuqaal dhowr daqiiqo soconaya oo ay iska soo duubeen Wariyeyaasha ayaa waxaa ay ku caddeeyeen in hanjabaadaha uga yimideen Madaxtooyada Maamulka Galmudug, uuna mas’uul ka yahay wixii iyaga soo gaaray Madaxweyne Axmed Qoorqoor.
Cabdullaahi Warsame Rooble iyo Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa ah Wariyeyaal si joogta ah barahooda Facebook kusoo qora dhacdooyinka ka dhaca deegaanada Galmudug, iyagoona dadka ku xiran u soo gudbiya xogo daah-soon iyo macluumaadyo.
Maalmo ka hor Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor ayaa sheegay inay jiraan Wariyeyaal buun buuniya weerarada Al-Shabaab, isaga oo sheegay inay ula dagaalami doonaan sida Al-Shabaab oo kale.